Wasiir Beyle oo ka hadlay Bankiga Adduunka oo $55 Milyan ugu deeqay Somaliya +(Shir jaraa’id) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wasiir Beyle oo ka hadlay Bankiga Adduunka oo $55 Milyan ugu deeqay...
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka Maaliyadda ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa shir jaraa’id kaga hadlay Bankiga Adduunka oo Dowladda Federaalka ugu deeqay $55 Milyan (Shan iyo konton Milyan oo lacagta Mareykanka ah).
Wasiir Beyle ayaa sheegay in Arbacada maanta ah la ansixiyay kabkii miisaaniyadeed ee dalka, kadib markii uu dhaqaalihii dalka saamayn weyn ku yeeshay xanuunsidaha COVID-19, ee Coronavirus uu keeno.
Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya ayaa marka hore yiri; “Waxaa maanta la ansixiyay kabkii miisaaniyadeed ee dalkan lagu kabaayay ee Bankiga Adduunka uu ku kabaayay, oo shan iyo konton milyan ah. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay habka uu inoola shaqeeyay adduunku, gaar ahaana Bankiga Adduunka iyo Hay’adda Lacagta Adduunka (IMF).”
Waxa kaloo uu yiri “Lacagtan waxay ka mid tahay waxyaabihii wanaagsanaa ee ka soo baxay deyn cafintii iyo shaqadii aan soo galnay ee dheereed ayay ka tarjumeysaa. Waxaa weeyaan wax dalkoo dhan ka dhaxeeya shan iyo kontonka milyan, Dowladda Federaalka ha ahaato ama dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka. Intaas ay tahay waxaa ay ku xiran tahayna waxaa weeyaan hoos u dhicii miisaaniyadda ee xanuunkan inkaarta qaba uu keenay dhaqliga hoos u dhacay, caawimo ay kabeyso weeye ama kab ah.”
Mr. Beyle ayaa sheegay taageerada ay xilligan ka helayn Bankiga Adduunka inay ku timid wada shaqayn wanaagsan oo dhex martay labada dhinac, dibna ay ugu laaban doonaan, iyadoo laga duulayo heerka uu gaarsiisan yahay Coronavirus.
“Runtii aad baan ugu faraxsanahay, waan ka soo shaqeynay, waala soo shaqeynay, waxaan isla garanay markaa, kabka loo baahan yahay intaa inuu yahay iminka. Hadana dhawaan waan ku noqon doonnaa, iyadoo la eegaayo habka COVID-19 ay u socoto. Waxay noo ballanqaadeen intaan sidaa u socono ee aan habkaa wadnaba Bankiga Adduunka, Afrika, IMF-ta iyo Midowga Yurub ay na daba jooggaan, afartaasaa ugu waaweyn.” Ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wuxuu shacabka Soomaaliyeed ogeysiiyay in arrimahan ay si dhow uga shaqayn doonto Dowladda Federaalka. Ka hor Coronavirus ayuu sheegay in qorshaha dowladda uu ahaa inay iyada ku filnaanto miisaaniyadeeda, welina ay taasi ku hawlan tahay, sidii ay kaga miro dhalin laheyd.
“Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegeenaa inaan arrimahaa aad uga shaqeynayno, oo aan dooneyno in si fiican loo hana qaado. Waxaana ku tala jirnay waxaa weeyaan intii aan xanuunkani inoo imaanin inaan isku filnaansho gaarno, oo xaqiiqdii inagu aan ku filnaan karno qarashka dowladdan lagu qarash-gareynayo inaan ku filnaan karno, haataana taasaa madaxayaga ku jirta.” Ayuu yiri Wasiir Belye.